Sidee lagu heli karaa Xalka khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya? – Bandhiga
Sidee lagu heli karaa Xalka khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya?
W/Q: Cabdirashiid Khaliif Xaashi, waa Agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage, horayna waxa uu u soo noqday Wasiir. Qoraalkani waa fikraddiisa shaqsiga ah, kamana tarjumayso fikradda Bandhiga Media iyo Machadka Heritage. Wixii aragti ah waxaa loogu soo hagaajin karaa: hashi2025@gmail.com